Queen For Seven Day ( 2017 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel June 03, 2017
1.6.2017 မှစတင်​ထုတ်​လွှင့်​ခဲ့ပြီး ongoing ကား​လေးဖြစ်​ပါတယ်​ ....
Main Cast တွေကတော့ Yeon Woo Jin , Lee Dong Gun & Park Min Young ( ကင်နာနာ ) တို့ ပါဝင်ထားပါတယ် ...
Supporting Role အနေနဲ့ Jang Hyun Sung , Son Eun Seo & Yoo Min Kyu တို့ က ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ် ....
ဇာတ်​လမ်း​လေးက​တော့ သူ့အစ်​ကို​တော်​ရဲ့အထင်​လွဲမှု​တွေကိုခံ​နေ​ရတယ့်​ မင်းသားဂျင်​ဆွန်း ...
​ချောင်​ကျတဲ့​တောရွာ​လေးထဲမှာ ဖွက်​ထားခံရတယ့်​ သခင်​မ​လေး​ချေ​ဂျောင်း ...
ပြီး​တော့ မင်းသားဂျင်​ဆွန်း ရဲ့အစ်​ကို​တော်​ ဂျိုဆွန်းမင်းကြီး သူတို့ ကြားကနန်းတွင်းအရှုပ်​အ​ထွေး​တွေကိုရိုက်​ပြထားတာပါ ....
​ချေ​ဂျောင်း နှင့်​ ဂျင်​ဆွန်း က​ရောဘယ်​လို​တွေ့ကြမလဲ မင်းကြီးက​ရော ဘာ​ကြောင့်​အထင်လွဲနေတာလဲ ... ?
ပြီး​တော့ Queen for Seven Days ဆိုတဲ့အတိုင်း ​ချေ​ဂျောင်းကဘုရင်​မဖြစ်​မှာလား ... ?
ဘုရင်​မဖြစ်​သွားခဲ့ရင်​လည်း ဘာ​ကြောင့်​နန်းသက်​က ၇ရက်​ပဲရှိတာလဲ ? ဆိုတာ ဒီကား​လေးမှာကြည့်​ရှုခံစားလို့ရပါပြီ ...
Rating အရကတော့ MyDramaList မှာ 8.3/10 နှင့် Viki မှာ 9.7/10 အသီးသီးရရှိထားတဲ့ Rating မြင့် ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပါ ....
Episode 1 ( MyanmeCloud )
Episode 1 ( Openload )
Episode2( MyanmeCloud )
Episode2( Openload )
Episode5( Openload Link
------------------------------------ ပြီးပါပြီ ------------------------------------
Historical Korea Romance
Labels: Historical Korea Romance
Kyal Zin Lin Nic June 4, 2017 at 10:42 PM
DUEL အာ့ကားလေးထွက်နေပီနှစ်ပိုင်း ကြည့်ချင်နေပီ
myomyo June 10, 2017 at 2:47 AM
Jackson June 23, 2017 at 4:41 AM
Than Naing Win June 24, 2017 at 9:21 PM
Jackson July 3, 2017 at 4:36 AM
Nilar Zaw Lin July 12, 2017 at 11:24 PM
Swe Zin July 14, 2017 at 1:59 AM
pk July 15, 2017 at 7:51 PM
Swe Zin July 17, 2017 at 9:10 PM
Swe Zin July 19, 2017 at 11:06 PM
pk July 22, 2017 at 7:25 PM
15 & 16 plz
pk July 23, 2017 at 11:59 PM
ep 15 & 16 plz
k July 24, 2017 at 12:31 AM
Yin Win July 24, 2017 at 1:37 AM
Yin Win July 24, 2017 at 6:05 AM
အပိုင်း ၁၅ နဲ့ ၁၆ တင်ပေးပါ fb မှာတင်တာက မကြည်လို့ပါ
pk July 24, 2017 at 8:11 PM
mie mie July 25, 2017 at 2:30 AM
Plz next Eps :D :D :D
Yin Win July 25, 2017 at 11:49 PM
၁၄ ကနေ ဆက်မတင်ပေးတော့ဘူးလား :( :( :(
Yin Win July 26, 2017 at 9:09 PM
pk July 27, 2017 at 1:22 AM
Yin Win July 27, 2017 at 7:23 PM
အပိုင်းသစ်တွေ ဆက်တင်ပေးအုံး Please
mie mie July 27, 2017 at 8:51 PM
k July 28, 2017 at 8:08 AM
please next episodes thanks you
Su July 29, 2017 at 10:47 PM
if u cant continue till end, u should not start at all... so angry
mie mie July 29, 2017 at 11:15 PM
Wint Naung July 30, 2017 at 5:07 AM
Thank you so much for new episodes.
Yin Win July 30, 2017 at 7:38 PM
mie mie July 30, 2017 at 8:45 PM
k August 1, 2017 at 9:19 PM
Yin Win August 3, 2017 at 12:26 AM
ep-17, 18 , 19 Please
Yin Win August 6, 2017 at 7:29 PM
Jackson August 8, 2017 at 5:08 AM
Myat momo August 11, 2017 at 1:48 AM